IWEBHUSAYITHI ISEMTHETHWENI IINKONZO
IWEBHUSAYITHI IINKONZO ZOMTHETHO
Ulungiselelo isemthethweni iinkonzo nenkxaso isemthethweni kwaye yesitalato abantu kwi-imigaqo nemiqathango yentengiso ubudlelwane phakathi sele kuba kakhulu ngokufanayo. Kuba amaqumrhu asemthethweni ubhaliso ezingama-kwaye amasebe, eyenziweyo, isondlo ka-contractual umsebenzi kufuna umntu isemthethweni uncedo. Ngoku, akukho umbutho okanye mali isicwangciso-akavumelekanga ukuba uzive kweli lizwe lethu kwi-zalisa ukhuseleko.
Iinkonzo ka-abaqondisi-mthetho kwaye abemi lanyanzelisa ukhuseleko lwabo namashishini abucala amalungelo. Ngaphezu koko, umba obalulekileyo ngu ukugcina iimfihlo iinkonzo kuvunyelwa ukuba abantu.
Isemthethweni uncedo kwi-sikhokelo somgaqo-nkonzo kwaye isondlo ezinikezelwe isemthethweni abantu abemi ifomu: oral kwaye ibhalwe iintlanganiso zokubonisana kwi isemthethweni ngemiba; drafting kwaye ubhaliso izicelo, izikhalazo, amaxwebhu ezikhalazo, kunye namanye amaxwebhu asemthethweni; ukumelwa kwi-iinkundla Jikelele kwaye ezikhethekileyo kwimimandla ephantsi kolawulo lwesixeko, njalo-njalo.
Umthetho site Esemthethweni iinkonzo ezijolise ukumiselwa kwaye realization ka-esihlangeneyo indlela loluntu lwahlulelwano ye-elinolwazi zoluntu ka-abaqondisi-mthetho kwi isemthethweni noncedo iinkampani kwaye abantu abasweleyo ka-umntu isemthethweni iinkonzo. Kwiwebhusayithi, kwi-sikhokelo somgaqo-free isemthethweni aid abaqondisi-mthetho anike isemthethweni ingcebiso kuba zombini amashishini kwaye abantu, kuquka hayi ekubeni mali namathuba ukuhlawulela iinkonzo zomthetho.Ngelishwa, kofakwano zomthetho ulwazi lwethu society nje sele iqalile ukuphuhlisa, abantu rhoqo kuba akukho unye ezisisiseko isemthethweni concepts.
Nolu expansion neenkqubo zomthetho ulwazi yonke imihla kufuneka ukuba umsebenzi wabo imisebenzi. Lo mbutho alikafiki ngokwaneleyo ukuqonda ndawo kwaye indima isemthethweni ubudlelwane phakathi, kwaye oku kukhokelela yokuba kwezo meko abaqondisi-mthetho ekuhlaleni isetyenziselwa hayi kwi-zalisa isandi, kangangokuba — firms, umntu businessmen kwaye abemi kwembandezelo ilahleko, rhoqo musa ukufumana ngokusemthethweni ngenxa ngomhla apho counted, concluding, umzekelo, zasekuhlaleni intengiselwano.
Njengenxalenye affiliate lwenkqubo, nabaqondisi-mthetho anike isemthethweni ingcebiso kwiwebhusayithi ye-new imibuzo ukuba akhaphe real estate eyenziweyo.
Irhafu Ityala Ingcebiso - Intlawulo Izicwangciso noxolelo Kuko